श्रीमानले श्रीमतीको खुट्टा ढोग्न किन नहुने ? - Enavanari
श्रीमानले श्रीमतीको खुट्टा ढोग्न किन नहुने ?
नेपाल बहुजाति र बहुसंस्कृति भएको देश भएका कारण पनि नेपाली महिलाको समग्र अवस्थालाई हेर्नको लागि सुक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ । नेपालमा नै कतिपय जातिका महिलाको अवस्था पुरुषको भन्दा कैयांै गुणा माथी छ भने कतिपय जातिमा महिलाको अवस्था अत्यान्तै दर्दनाद छ । हामीले समानताका कुरा गरीरहदा कुन वर्गका महिलाको कुरा गरिरहेका छौ त्यता पनि ध्यान जान आवश्यक छ भने समानता के लाई भन्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि विचार पुर्याउन आवश्यक छ । अहिले हामी पढ्लेखेका महिला र पुरुषको समान अवस्था छ भन्दै लेखिरहदा कुन कुरामा समानता छ भन्ने लेख्न भुलिरहेका छौ । मेरो एकजना साथी जो नामचलेको बैकको राम्रै पोजिसनमा काम गर्दै छिन् भने उनका श्रीमान पनि उनी सरहै पोजिसनमा अर्को बैकमा कार्यरत छन् । मेरो साथीको ड्युटि हो विहान उठ्नु संयुक्त परिवार भएका कारण परिवारका लागि चिया बनाउनु, बालबालिकालाई खाना खुवाउनु, खाना पकाउनु अनि श्रीमानको कपडामा समेत आइरन गरेर संगै तयार भएर अफिस जानु । उनका श्रीमानको पनि आफ्नै ड्युटि छ विहानको चियाको चुस्किसँगै पत्रिका पढेर देश विदेशका समाचार संकलन गर्नु र खाना खाएर श्रीमतीलाई उनको अफिस छोड्दै आफ्नो अफिस जानु । बेलुका फेरि त्यहि आआफ्नै रुटिन श्रीमती अफिसबाट आएपछि चिया बनाएर परिवारका सबै सदस्यलाई दिएर खाना पकाउनु र खुवाउनु अनि बालबालिकाको होमवर्कमा सहयोग गर्नु, श्रीमानको ड्युटि चिया खादै टिभि हेर्नु, सामाजिक संजालमा व्यास्त रहनु र श्रीमतीले पकाएर खाना खान बोलाएपछि खाना खानु । उनीहरुको समानता भनेको केवल शिक्षा अनि कमाई मात्रै हो नियालेर हेर्ने हो भने ।
म पनि एउटा विवाहित महिला मलाई लाग्छ ममा समानता धेरै हदसम्म लागु हुन्छ । जब म श्रीमानको घरमा जान्छु सबैभन्दा पहिला म श्रीमानको आमाको खुट्टामा आदर स्वरुप ढोग्छु, मेरो श्रीमान पनि मेरो बाआमाको घर जानुहुन्छ तर कहिल्यै उहाँले श्रीमतीको बा मेरो बा समानका हुन् भनेर ढोगेको देखेको छैन । यदि बुहारीले सासुलाई आमा मानेर ढोग्छे भने त्यहि समान लेभलको ज्वाइले किन ससुरालाई बाबु मानेर ढोग्न नहुने ? हामी समानताको कुरा गर्छौ आमाजु र नन्दको खुट्टा बुहारीलाई ढोगाउछौ भने सालो र जेठानको खुट्टा ज्वाइले ढोगाउन सक्छौ त पक्कै सकदैनौ ? हुनत आखिर दुबै उतिकै हुन् । श्रीमान श्रीमती दुबै फरक परिवेश, फरक संस्कारमा हुर्केका हुन्छन् र एकआपसमा मिलेर सुन्दर परिवार बसाउने, साथ सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यता अनुशार विवाह बन्धनमा बाधिएका हुन्छन् । एकअर्काको पुरकका रुपमा जोडिएको सम्बन्धमा यति ठूलो विभेदले महिलालाई सधै पुरुषको सहयोगी र उसको परिवारको हेरचाह गर्ने एउटा साधनको रुपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । एउटी महिला विवाह पश्चात गर्भवती हुन्छे, नौ महिना सम्म पेटमा बोक्छे, आमाको शरीरको रगतबाट बच्चा हुर्कदै जान्छ अनि जन्म लिन्छ । जन्मना साथ वरिपरिकाले भन्छन् ल यो तेरो खुन हो, बंश हो । बंश त सहि तर आमा बुबा दुबैको खुन भनिदिए के विग्रन्थ्यो समाजले । तर त्यो भन्न चाहदैन । यदि त्यस्तो हुँदो हो त पुरुषको हैकम कम हुन्छ भन्ने त्रास नजानिदो रुपले समाजमा बसेको छ । कतिपय जातिमा ज्वाईले पनि ससुराको खुट्टा ढोग्ने चलन छ तर त्यो सिमित जातिमा मात्रै ।
अर्को कुरा हाम्रो तराई भेगका कतिपय समुदायमा ज्वाई किन्नु पर्छ । यदि डा. केटी छ भने र डा. नै केटा छ भने पनि त्यहाँ त्यो केटालाई डा. पढाउदा कति खर्च गरेको छ त्यो सबै असुल्ने गरि तिलक मागिन्छ । भलै कानूनी रुपमा दाइजो अपराध होला तर समाजले त्यसलाई अझै पनि संरक्षण गरिरहेको अवस्था छ । एउटी छोरीलाई जन्माएर हुर्काएर पढाएर, सक्षम बनाएर कमाउन सक्ने भएपछि विवाह गरेर पठाइन्छ । उसले विहे गरेपछि कमाएको सम्पत्ति त्यो श्रीमानको परिवार या श्रीमानकै लागि हो तर उसँग विहे गर्नेले आफुले पढ्दा लागेको समेत त्यो केटीको बाउबाट असुल्छ र श्रीमती र ससुरालीको सम्पत्तिको मालिक बन्छ अब यहाँ कहाँ निर छ समानता । अहिले पनि विवाहमा श्रीमानको खुट्टाको पानी खान लगाइन्छ, ढोग्न लगाइन्छ बेहुलाको खुट्टा बेहुलीलाई तर समान जग्गेमा बसेर सहयात्रा गर्न तयार बेहुलालाई चाहि बेहुलीको खुट्टा ढोग्न किन लगाइदैन ? हामी हिन्दुहरुको महान पर्व दशैं । अहिले पनि दशैंमा टिका लगाइदिदा श्रीमतीलाई लगाएर श्रीमानलाई लगाइदैन त्यसो गर्दा जुठो हुन्छ रे, त्यसैले पहिला श्रीमानलाई लगाइदिएर अनि त्यो टिका श्रीमतीको निधारमा लगाइन्छ । यो अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि लागु भएका कुरा हुन् । धेरै कुरा परिवर्तन नभएका होइनन् । आज भन्दा १२ बर्ष अगाडि मेरो फुफु फुपा मेरो घरम आउनु भएको थियो । फुपुले फुपा सँगै बसेर खाना खान मान्नु भएन जब फुपाले खाना खाएर एक डल्लो भात थालमा छोडेर उठ्नु भयो अनि त्यो थालमा खाना खान मेरो फुपु बस्नुभयो । मैले भने हैट यस्तो छोडेको भात खान हुन्न जुठो खानु बेग्लै हो छोडेको त अति भयो फुपु । फुपुले भन्नु भयो यो शुरुवाटै यस्तै लगाए, आमाले पनि त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो अहिले सम्म पनि बानी पर्यो । मैले खाइन भने तेरो फुपाले मैले मायाले छोडिदिएको खाइन भनेर रिसाउछन् । मैले भने त्यसो भए कहिले काहिँ तपाईले पनि मायाले छोडिदिनुन फुपालाई तपार्इंले नछोड्दा माया गर्नुभएन भनेर फुपाको मनमा गुनासो होला । फुपुले भन्नुभयो हामी महिलाले हाम्रो संस्कार मान्न पर्छ त्यसो भन्न पनि पाप लाग्छ । जब समानताको कुरा गर्छौ समानता भनेको ठूलो कुरामा मात्रै होइन साना साना कुरामा पनि हुनुपर्छ । जब सम्म सानो सानो कुरामा समानता आउदैन समान समाजको कल्पना गर्न बेकार छ ।